Dowladaha Kenya Iyo Itoobiya oo Ku Tartamaya Qaadka Iyo Khamriga Ay Usoo Iib Geeyaan Soomaaliya. – Shabakadda Amiirnuur
Dowladaha Kenya Iyo Itoobiya oo Ku Tartamaya Qaadka Iyo Khamriga Ay Usoo Iib Geeyaan Soomaaliya.
June 24, 2019 8:04 am by admin Views: 112
Dowladaha Itoobiya iyo Kenya oo labaduba ka mideysan in qariidada adduunka laga waayo qaran jira oo Soomaaliya la yiraahdo ayaa tartan xooggan ugu jira suuq geynta qaadka iyo maandooriyaasha kale oo ay khamradu ugu horreyso.
Suuqan oo marxalado badan soo maray ayaa waxaa haatan dhaqaalaha ugu badan ka hela dowladda Itoobiya sida ay sheegayaan ganacsatada Kenya.
Maadaama Itoobiya ay milatari ahaan u heysato gobolada qaar, kuwana ay si dadban u maamusho si ka ballaaran Kenya ayaa waxaa u suura gashay in Qaadkeeda iyo Khamrigeeduba suuq fiican helaan.
Meelaha ugu badan ee ay u iib geeyaan waxaa kamid ah gobolada Wuqooyi Bari iyo Wuqooyi Galbeed oo ay ka jiraan maamullo ay galaangal iyo amarro ku leeyihiin, waxaana tusaale u ah saamiga ay ku yeelatay dekedda magaalada Berbera oo ah dhul Soomaaliyeed oo aaney iyadu shaqo ku lahayn.
Ganacsatada Kenya ee qaadka ayaa sheegay in suuq cusub oo muqaadaraadka ah ay ka raadinayaan dalalka Mozambique iyo Jabuuti, maadaama ay Itoobiyaanku si aad ah ugu ciriiriyeen suuqa Jaadka.
Kello Harsama, oo ah Guddoomiyaha Guddiga Ganacsatada Qaadka ee dalkaas ayaa warqad u diray Wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Nairobi, isagoo ka codsaday iney gacan ka geystaan sidii Suuq cusub looga heli lahaa Afrika.
Kenyaanka ayaa sheegay iney Soomaaliya qaadka geeyaan meelo kooban oo Kismaayo ay kamid tahay islamarkaana ay billaabayaan sahminta suuqyo kale.
Wafdi xaqiiqo raadin ah oo ka socda ganacsatada qaadka ee Kenya oo tagay dalka Itoobiya ayaa sheegay iney soo ogaadeen in Itoobiya say dalka Jabuuti oo kaliya maalin kasta u dhoofiso 16 Tan oo Qaad ah, Somaliland iyo Puntland ayaana kasii daran.
Dalka Soomaaliya ayaa u muuqda mid suuq u noqday qurunka iyo muqaadaraadka iyadoo dalalka Kenya iyo Itoobiya ay maalin walba Soomaaliya ka helaan lacago malaayiin dolar ah.
Dadka ugu badan ee qaadka cuna ayaa waxaa la sheegaa iney yihiin madaxda DF, ciidamadooda, waxayna ka dhigan tahay in canshuurihii laga qaaday bulshada Soomaaliyeed lagu quudinayo bulshooyinka Kenya iyo Itoobiya.